Ngwa iji nweta onyinye na ego mgbe ị na-azụ ihe n'ịntanetị | ECommerce ozi ọma
Ngwa iji nweta onyinye na ego mgbe ị na-azụ ihe n'ịntanetị
More na ndị ọzọ ndị mmadụ na-eji Internet eme ka ha ịzụrụ na ọ bụ eziokwu na-enye na ego bụ a ụzọ dị mma iji chekwaa ego. Ngwa ndị a iji nweta onyinye na mwepu ego bụ ego ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ dị ka Top Cheap, ihe na oge nke zụta online, ọ nwere ike inyere gị aka ọ bụghị naanị ịchekwa ego, kamakwa ịchọta ndị ịchọrọ iji.
1 Ngwa iji nweta onyinye ntanetị
Ngwa iji nweta onyinye ntanetị
Na ngwa a, ndị ọrụ kesara onyinye ha mara ma bipụta ha na slickdeals saịtị. Nwere ike nweta azụmahịa na ego na telivishọn, ndị na-arụrụ ahịhịa, ndị na-eme ka kọfị, wdg.
N'okwu a, ọ bụ ngwa na-arụ ọrụ dị ka ihe mgbakwunye na ihe nchọgharị ahụ. Na-agwa gị banyere ịzụrụ ihe n'ịntanetị a ma gwa gị ma ọ bụrụ na ngwaahịa nwere ọnụahịa dị ala na nke ọzọ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị Dabere na ndị mmepe ngwa ahụ, ndị ahịa nwere ike ịchekwa $ 17-20 maka $ 100 ọ bụla ha mefuru.
Ọ bụ ngwa na-ejikọ Kupọns na onyinye sitere na ụlọ ahịa na ụlọ ahịa ọgwụ karịrị 65.000. Ngwa ahụ na-enye gị ohere ịmepụta ndepụta ụlọ ahịa na ngwaahịa ịchọrọ ma wee kpebie nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ịga.
Ọhụrụ mbipute nke ngwa na-abịa na ọtụtụ puku Kupọns si na weebụ niile ọ na - enye gị ohere ịdebanye aha ma chekwaa Kupọns ndị a niile ka ị jiri ha n'ịntanetị. Ọ nwere uru na ọ na - enye gị ohere ịchọ onyinye na nkwalite na ụlọ ahịa dị na mpaghara.
Ngwa a bara ezigbo uru dịka ọ na - enye gị ohere i scanomi ngwaahịa mgbe ị na - azụ ahịa. Wayzọ a ị nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na enwere ụlọ ahịa ndị ọzọ ebe ha na-enye ha na ọnụ ala. Ka mma, ị nwere ike ịtọlite ​​ọnụahịa anya ka ọ bụrụ na erere ngwaahịa ma ọ bụ na ọnụ ala dị ala, agwa gị.
Na njedebe ndị a bụ ngwa iji nweta onyinye na ego nke ahụ ga - enyere gị aka imeziwanye ahụmịhe gị mgbe ị na - azụ ahịa n'ịntanetị ma chekwaa nzụta gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Ngwa iji nweta onyinye na ego mgbe ị na-azụ ihe n'ịntanetị
Google My Business, ezigbo ngwa gam akporo maka ndị ọchụnta ego
Gini mere Ecommerce jiri jiri Ngwa Webmaster Bing?